Jannadii Dib Baa Loo Helay | Farriinta Kitaabka
Jannadii Dib Baa Loo Helay
Yehowah Boqortooyada Masiixa buu quduus kaga dhigi doonaa magaciisa oo sayidnimadiisa ku caddeyn doonaa shar oo dhanna ku baabbiʼin doonaa
MUUJINTII oo ah buugga ugu dambeeya ee Kitaabka Quduuska ah binu’aadanka oo dhan rajo bay siisaa. Buuggan uu rasuulkii Yooxanaa qoray waxaa ku kooban waxyaaluhuu Ilaahay rasuulkan tusay. Waxyaalahaas waxay ku dhammaadaan fulinta ulajeeddada Yehowah.
Ugu horrayn Yooxanaa waxaa la tusay Ciise oo samada lagu soo sarakiciyay. Kiniisadaha qaarkood buu ammaanayay oona saxayay. Aragtidiisii labaadna wuxuu ku arkay carshigii Ilaahay oo samada ku yaal iyo malaaʼigo ammaan u jeedinayo.
Ulajeeddadii Ilaahay siday u sii socotay Wankii oo ahaa Ciise Masiix baa la siiyay qorniin duudduuban oo toddoba shaabadood ku yaallaan. Markii afartii ugu horreeyay la furay waxaa dunidii ku soo orday fardooley. Kii ugu horreeyay wuxuu ahaa Ciise oo boqor ah oo taajkiisa qabo oo faras cad ku fadhiyo. Dabadeedna waxa ka soo dabo baxay niman wato fardo midabyo kala duwan. Waxay matalayaan dagaallada, abaarada iyo cudurrada. Waxyaalahan waxay dhici doonaan maalmaha ugu dambeeya ee nidaamka dunidan. Shaabadda toddobaad markii la furay toddoba buun baa la afuufay oo naadinayay xukunka Ilaahay. Waxan waxaa ka daba yimid toddoba belaayo oo ka dhigan cadhada Ilaahay.
Boqortooyada Ilaahay oo samada ka aasaasmatay waxaa lagu calaamadeeyay wiil dhashay. Samada waxaa ka dhacay dagaal oo Shayddaankii iyo malaaʼigihiisii sharka lahaa dunida baa lagu soo tuuray. Markaasaa cod weyn ku dhawaaqay ‘waxaa hoogay . . . dhulka.’ Ibliiskii aad buu u cadhaysan yahay oo wuxuu garanayaa in waqtigu ku yar yahay.—Muujintii 12:12.
Yooxanaa wuxuu samada ka arkay Ciise oo wan lagu matalay waxaana la jiray 144,000 oo qof oo dunida laga doortay. Buugga Muujintii halkan wuxuu inaga baraa inay qaybta labaad ee farcanka tiradoodu tahay 144,000 oo qof. Kuwaasi Ciise bay “wax la xukumi doonaan.”—Muujintii 14:1; 20:6.
Maammulayaasha dunida waxay u ururi doonaan “dagaalka maalinta weyn oo Ilaaha Qaadirka ah” Armageddoon. Waxay u kici doonaan inay la dagaallamaan Ciise kan ku fadhiya faraska cad oo wada ciidammadii samada. Maammulayaasha dunida gebigood waa la baabbiʼin doonaa. Ciise intuu Shayddaanka xiro buu “kun sannadood” dunida la maammuli doonaa 144,000 oo qof oo lala doortay. Markay kunka sanadood dhammaadaan Shayddaanka waa la halaagi doonaa.—Muujintii 16:14; 20:4.
Kunka Sanadood ee Maammulka Ciise maxay uga dhigan tahay binu’aadanka Ilaahay dhegeysto? Yooxanaa wuxuu yiri: “[Yehowah] indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen.” (Muujintii 21:4) Adduunku janno buu noqon doonaa.
Sidan buu buugga Muujintii u dhammaystiraa farriinta Kitaabka. Boqortooyada Masiixa baa magaca Yehowah quduus ka dhigi doonto oo saydnimadiisa caddeyn doonto weligiis iyo weligiisba.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugga Muujintii.
Fardooleyda uu Yooxanaa arkay maxay ka dhigan yihiin?
Waxyaalahee kale oo waaweyn baa dhacay siday u socotay ulajeeddadii Ilaahay?
Armageddoon waa maxay maxayna ku gabaggaboobi doontaa?
Waa ayo “Baabuloonta Weyn” oo uu buugga Muujintii ka hadlo? Tani waa midda loogu yeeray “dhillada weyn” oo matashaa diimaha beenta ah oo Ilaahay ka soo horjeeda oo dhan. Waxay isku iibisaa oo ka dhillaysataa dowladaha dunida. Buugga Muujintii wuxuu inoo sheegaa waqtiga uu Yehowah Ilaah doorto inay dowladahan weerari doonaan oo biʼin doonaan dhilladan.—Muujintii 17:1-5, 16, 17.
Wadaag Wadaag Jannadii Dib Baa Loo Helay